नेपाल आज | ‘पशुपंक्षीमा विवाह हुँदैन, बलात्कार पनि हुँदैन’ (भिडियोसहित)
‘पशुपंक्षीमा विवाह हुँदैन, बलात्कार पनि हुँदैन’ (भिडियोसहित)
शुक्रबार, १९ असोज २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
स्वामी आनन्द अरुण ओशो तपोवनका संस्थापक हुनुहुन्छ । जीवन, दर्शन र मानिसका अनेकन समस्याको जड के हो भन्ने विषयमा स्वामी आनन्द अरुणले धेरै प्रवचन पनि दिनु भएको छ । ओशो दर्शनका अनुयायी आनन्द अरुण ओशो सन्यासी पनि हुनुहुन्छ । ओशो तपोवनमा धेरै मानिसहरु ध्यानका लागि पुग्छन् । धेरै मानिसहरु अरुण स्वामीको मार्गनिर्देशनबाट लाभान्वित पनि भएका छन् । ओशो तपोवन योग ध्यान गर्न चाहनेकहरुका लागि एक गन्तव्य पनि हो । यस्तो तपोवन सञ्चालन गरेर धेरै मानिसहरुलाई दुःख र कष्टबाट पार लगाउन सहयोग गर्नु भएका अरुण स्वामीसँग हामीले जीवन र दर्शनबारे कुराकानी गरेका छौं । स्वामीजीले व्यक्त गर्नुभएको धारणाको सार निम्नानुसार छः
दुःखको कारण महत्वाकांक्षा
मानिसहरु खुसी हुन चाहन्छन् तर भइरहेका छन् दुःखी । दुःखको मुख्य जड नै महत्वांकाक्षा हो । आफ्नो क्षमताभन्दा बढी महत्वाकांक्षा पालेपछि हामी दुःखी हुन्छौं किनभने ती सबै सजिलै पूरा हुँदैनन् । आफ्नो महत्वाकांक्षालाई सीमाभित्र राख्नु पर्छ । जय, पराजयमा समभाव राख्न सक्नु पर्छ ।
लालच मानव जातिको पुरानो रोग
धनको लालच नयाँ होइन । यो सदियौंदेखि मानिसलाई धनको रोग लागेको छ । धनको रुप फेरिएको छ । सार उहि हो । अहिले नयाँ गाडी खोज्छ मानिस, पहिले घोडा खोज्थ्यो । लालच मानवजातिको पुरानो रोग हो । यो समस्याको समाधान भनेको सही शिक्षा र अध्यात्मक चेतना प्रवाह गर्न सकियो भने यो लालचबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
विद्यार्थीमा निराशाको कारण
नेपालको शिक्षा पद्धति रुग्ण भयो । महत्वाकांक्षा जगाउने शिक्षा दिइरहेका छौं हामी । सफलता भनेको डाक्टर, इञ्जिनियर हुनुलाई मानियो । असल हुन अहिलेको शिक्षामा सिकाइँदैन । साना नानीहरुदेखि नै बच्चाहरुमा यस्ता सपना देखायौं, जुन हामीले देखेका छौं । विद्यार्थीको क्षमता र रुचीलाई ख्याल नगरी शिक्षा दियौं । जसका कारण विद्यार्थीहरु पीडित छन् । आमाबाबु, परिवार, समाजको महत्वाकांक्षा विद्यार्थीमाथि थोपरिएको छ । राम्रो कवि, लेखकलाई डाक्टर बनाउन खोजिन्छ भने समस्या त भइहाल्छ ।
काम ‘स्लो’ छ, नाम ‘फास्ट ट्रयाक’
राजनीतिज्ञहरुसँग भेट हुँदा म देशको पीडा सेयर गर्छु । युवाहरुको दुःखका कुरा उहाँहरुसँग राख्छु । मेरो निजी चाहना खास केही छैन । युवाहरु आफ्नो देश लथालिंङ छाडेर विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । नेताहरुका पनि केही बाध्यता छन् । डेमोक्र्याटिक सिस्टममा कुनै पनि निर्णय लिन सजिलो हुँदैन । चीनमा एक निर्णय एक दिनमा हुन सक्छ । त्यहाँ एकतन्त्रीय शासन छ । हाम्रोमा पनि पञ्चायती व्यवस्थामा १० मिनेटमा निर्णय हुन्थ्यो । अहिले दश दिन लाग्छ । राम्रो कामको पनि विरोध हुन्छ । डेमोक्रयाटिक सिस्टम कन्फ्युज्ड सिस्टम हो । राम्रोसँग हेन्डल गरिएन भने यसले समस्यामा पार्छ । डेमोक्रयाटिक कल्चर निर्माण नगरी व्यवस्था लागू गर्दा प्रतिफल नकारात्मक आइरहेको छ । संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षले सधै विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने बुभिएको छ । कतिपय निर्णय त १० वर्षमा पनि निर्णय हुँदैनन् । भयो भने पनि १० वर्ष लाग्छ कार्यान्वयन हुन । मेलाम्चीको पानी ल्याउने प्रस्ताब कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको थियो । तर अहिले अवस्था यस्तो भयो ।
फास्ट ट्रयाककै कुरा गरौं । फास्ट ट्रयाक त नाम मात्रै भयो । काम त स्लो छ । न्यायको क्षेत्रको कुरा पनि त्यस्तै छ । समयमा न्याय नपाउनु पनि अन्याय गर्नु हो ।
डेमोक्रेसीका लागि हामी तयार नै भएका रहेनछौं
डेमोक्रेसी आफैमा नराम्रो व्यवस्था होइन । एकतन्त्रीय राजतन्त्रीय व्यवस्था त्यति राम्रो होइन । डेमोक्रेसीमा सुधार आवश्यक छ । खासमा यो व्यवस्थाको लायक हामी आफै बनिसकेका छैनौं । अहिले पनि हामी साम्प्रदायिक सोच राख्छौं । क्षेत्र, लिंग, जातका आधारमा हामी विभक्त हुन्छौं । नेताको चाकरी गर्ने, काम लिन खोज्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो संस्कारबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौं । यसकारण हामीले डेमोक्रेसीको फल पाउन सकेका छैनौं ।
डेमोक्रेसी होइन यसलाई मेरिटोक्रेसी बनाउनु पर्छ । अहिलेको प्रजातन्त्र भनेको भिडतन्त्र हो । भिडले गरेको निर्णयका आधारमा राजनीति चलेको छ । नेताहरुले पनि देश र जनताको हित भन्दा पनि आफूलाई भोट दिनेहरुलाई खुसी बनाउनका लागि काम गरिदिन्छन् । यो डेमोक्रेसीको भावना होइन । हामीले प्रजातन्त्र मात्रै बुझ्न सक्यौं । जवाफदेहीता बुझेनौं । हामीले चाहेको अहिलेको जस्तो प्रजातन्त्र होइन, गुणतन्त्र हो ।
नयाँ राजा धेरै भए
राजनीतिमा बढी उमेर भएका नेताका कारण समस्या भयो । ६–६ महिनामा विदेशमा उपचार गर्न जाने, अक्सिजनको सिलिण्डर छेउमा राखेर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री धेरै भए । अबको क्याबिनेटमा ५० वर्षभन्दा कम उमेरका ५० प्रतिशत मन्त्री हुनुपर्छ । ताकि उनीहरुले धेरैभन्दा धेरै समय काममा दिन सकून् । व्यक्ति पूज ागर्ने चलन छ ।
राजसंस्था त फालियो । पहिले एउटा राजाको पूजा हुन्थ्यो । अहिले १०–१२ वटा नयाँ राजा भेटिएका छन् ।
आखिर श्रीकृष्ण रहेछन् एक
धेरै मानिसहरुले जीवनको अन्त्यमा अध्यात्मिक ज्ञान पाउँछन् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले समेत जीवनको अन्त्यमा भन्नु भएको थियो कि – ‘आखिर श्रीकृष्ण रहेछन् एक, न भक्ती भो, ज्ञान न भो विवेक’ ।
अध्यात्मिक व्यक्तिबाहेक कसैले पनि तृत्त भएर मर्न सक्दैन । भौतिकवादी मानिस शान्त भएर मर्न सक्दैन । महत्वाकांक्षाको दौडमा दौडिदै मानिसले जीवन बुझ्नै पाउँदैन । जीवन हामी अध्यात्मवादीले मात्रै बुझ्छौं । शान्तिपूर्वक जो मर्न पाउँछ, त्यो अध्यात्मवादी नै हो ।
भोट नदिने, राम्रो नेता खोज्ने
पढेलेखेका मानिसहरु, सभ्रान्त भनिनेहरु निर्वाचनको बेला घामले पोल्छ, भिड हुन्छ, हैरान हुन्छ भनेर मत खसाल्न जाँदैनन् । मेरो मतमा त मत अनिवार्य खसाल्नु पर्ने नियम बनाउनु पर्छ । आफू भोट नहाल्ने, राम्रो प्रतिनिधि नचुन्ने अनि पाँच वर्षसम्म ‘नेताले देश बिगारे’ मात्रै भन्नु हुँदैन । निर्वाचनको बेला सवारीसाधनहरु चल्न नदिने नियम पनि राम्रो होइन । अव्यवहारिक नियम किन नहटाइएको हो बुझ्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचारको मूल कारक गरिबी हो । गरिब देशहरुमा भ्रष्टाचार हुन्छ नै । नेपालमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार पाकिस्तान, बंगलादेशमा छ । अहिले वडाध्यक्षको चुनावका लागि ४० लाख खर्च गर्छन् । संसदका लागि १ करोड लाग्छ । त्यो एक करोड भनेको लगानी हो । त्यो लगानी उठाउन सत्तामा पुगेपछि शुरुमा त काम गर्नै पर्छ । त्यही कामबाट हुन्छ भ्रष्टाचार । राजनीति एक व्यापार जस्तो बनेको छ ।
सामाजिक समस्याको मूल जड नै ‘विवाह’
मानिसहरु समाजमा बलात्कार वृद्धि भयो भनेर चिन्तित हुन्छन् । समस्याको जड के हो भनेर बुझ्दैनन् । कसैलाई सुन्दा तीतो लाग्न सक्छ । तर समस्याको मूल जड भनेको विवाह हो । कुनै पनि पशुपंक्षीमा विवाह देख्नु भएको छ ? हो मान्छेमा पनि यो विवाह भन्ने चलन नै थिएन । पछि यस्तो चलन आयो । विवाहका कारण सेक्सलाई अस्भाविक बनाइदियो । पशुपंक्षीमा विवाह छैन –त्यहाँ सेक्स एक नेचुरल र नर्मल रुपमा रहेको छ । मानिसमा सेक्स नर्मल बनाइएन । विवाहको उमेर बढ्दै गइरहेको छ । पहिले सेक्सुअल मेचुरिटी १४–१५ वर्ष हुन्थ्यो । त्यही बेला विवाह हुन्थ्यो । अहिले सेक्सुअल मेचुरिटी १०–११ मा हुन्छ । अहिले २५ वर्षसम्म त विश्वविद्यालयमा जान्छ । करिअर बनाउदा ३० वर्ष हुन्छ । विवाह ३०–३५ मा हुन्छ । २५ वर्षसम्म सेक्सको चाहना अधिक हुन्छ । सेक्स गर्ने बेला रोकेर उमेर ढल्केपछि सेक्सको अनुमति दिइन्छ । मूल समस्या नै यहि हो । सेक्स किन दबाइन्छ ? सेक्स दबाउने, जबर्जस्ती घोकाउने व्यवस्था नै खराब हो ।
बलात्कारीको लिंग काट्ने कुरा
मानिसहरु बलात्कारीलाई फाँसी दिनु पर्ने भनेर कराउँछन् । बलात्कारीको लिंग काटिदिनु पर्ने कुरा पनि आउँछ । अहिले पनि विश्वमा धेरै देश छन् जहाँ बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ । तर त्यहाँ पनि बलात्कार शुन्य त भएको छैन । मान्छेको हर्मोनको इफेक्टका कारण सेक्स गर्न मन लाग्ने हो । यो कुरालाई दबाएर के फाइदा ?
जैविक र प्राकृतिक कुरा दबाएर समधान निस्किदैन । कडा कानुन बनाउँदैमा बलात्कार रोकिदैन । सेक्सुअल मेचुरिटी र विवाहको उमेर पहिले समान थियो । समस्या कम थियो । अहिले त सिस्टम नै यस्तो भयो कि विवाह गर्ने उमेर ३० वर्ष पुग्यो । २५ वर्षपछि सेक्सको चाहना कम हुन्छ । ४५–५० को मानिसले बलात्कार गर्छ । किन त भन्दा यसको कारण भनेको रुग्ण सेक्स हो । उसको इच्छा १५–२५ मा राम्रो सेक्स गर्न पाएन भने त्यो व्यक्तिको सेक्सको चाहना ७० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन ।
पोर्नोग्राफी बन्द गर्नु हुँदैन /वेश्यालय चाहिन्छ
प्रविधिलाई रोकेर रोकिदैन । पोर्नोग्राफी बन्द हुनै सक्दैन । सकिदैन । नेचुरल कुरालाई बन्द गर्दा दुर्घटना हुन्छ । वेश्यावृत्ति खुला छैन तर चलिरहेका त छ । रोकेर रोकिने वाला छैन । गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले भनेको कुरामा मेरो समर्थन छ । उहाँले वेश्यावृत्तिलाई कानुनी बनाउनु पर्छ भन्नु भयो । यो व्यवहारिक कुरा हो । तर धेरै गाली खानु भयो । तर वेश्यावृत्ति त अहिले पनि भइरहेको छ । वेश्वावृत्ति कतै पनि रोक्न सकिदैन । स्टालिन, हिटलरले पनि सकेनन् ।
विश्वविद्यालय नपुगेको आधुनिक भनिने शिक्षा नपुगेका कतिपय आदिवासीहरुको वस्तीमा विवाह र वेश्यावृत्तिको चलन छैन । यस्ता समाज छन् । त्यस्ता समाजमा बलात्कार हुँदैनन् । भारतको छत्तीसगडमा महिलाहरुलाई यौनका चाहना भएपछि घुट्लुमा जान्छन् । जहाँ अरु पुरुष पनि आउँछन् । मन परेकासँग सेक्स गर्छन । त्यो घुट्लु प्रथा त्यहाँ छ । त्यहाँका मानिसलाई हस्तमैथुन थाहा छैन । सुनाउँदा ‘यस्तो पनि हुन्छ ?’ भनेर हाँस्छन् । जनावरहरुले पनि त हस्तमैथुन गर्दैन । तर आजको विश्वमा महिलाको नांगो शरिर हेर्न मानिसले पैसा खर्च गर्छ । अर्थात समाज रुग्ण बन्दै गएको छ । सेक्समा सबैभन्दा लिवरल देश हल्याण्ड हो । त्यहाँ सेक्सुअल क्राइम पनि कम छ । यो तथ्यमा पनि बिचार गर्न जरुरी छ ।
ओशो तपोवनले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन कब्जा गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । मेरो प्रश्न यो छ कि के शिवपुरीको जमिन कब्जा गर्न सम्भव छ ? सेना राइफल बोकेर बसेको छ, यस्तोमा एउटा जोगीले निकुञ्जको जमिन कब्जा गर्न सक्ला ?
एक माताजीले मेरो खुट्टामा मसाज गरिदिनु भयो । एक माताले आफ्नो बच्चालाई जसरी मालिस गरिदिनु भयो भने यसलाई किन आश्चर्य मान्नु ? दृष्टि राम्रो छ भने सबै राम्रो हुन्छ । दृष्टि नराम्रो छ भने सबै नराम्रो देखिन्छ ।
नारायण साई नेपाल आउँदा उहाँको कुनै विवाद थिएन । उहाँ आउनु भयो । बस्नु भयो । उहाँ आशाराम बाप्पुका छोरा हुन्छ । उहाँहरुका धेरै फलोअर पनि थिए । उहाँ पनि दुई रात पैसा तिरेर बस्नु भयो । पछि उहाँहरुको विवाद सार्वजनिक भयो । विवाद आउनु अघिको कुरालाई पनि तपोवनसँग जोडेर हेरिनु ठीक हुँदैन होला ।
१५ दिनमा सबै रोगको उपचार गर्ने दावी गरेर प्रचार गर्ने कुमार स्वामीको मतसँग मेरो सहमति छैन । उहाँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ । मित्रहरुले कुनै गलत गर्नु भयो भने त्यसको दोष मलाइ दिन मिल्दैन । बाबुराम पनि मेरो मित्र हुनहुन्थ्यो । तर उहाँको कामले कति धेरै मानिसहरु मारिए । त्यसको दोष अर्को साथीलाई जाँदैन ।
सेक्स बलात्कार अाेशाे अानन्द अरुण अाेशाे तपाेवन
लोकसंगीतमा लय मिल्नु सामान्य हो (भिडियोसहित)
सांसद शान्ता चौधरीले शर्मालाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन्(भिडियाेसहित)
जनताका लागि धेरै काम अगाडि बढेका छन्, त्रिदेशीय साझेदारीको ढोका खुल्यो
तपोवनको गाडीमा आगजनी, साधकहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास!